उपभोक्ता कुना: हुनुपर्छ के र कसरी लागू गर्ने?
स्वागत वा कोठा सेवा - यो कुनै पनि उद्यम को "अनुहार" छ। यो एउटा आवश्यक तत्व ग्राहकहरु को अधिकार को सुरक्षा मा जानकारी अडान छ। जानकारीमूलक र सुन्दर डिजाइन "उपभोक्ता कुना" आगन्तुकहरूलाई संचार केन्द्र हुन सक्छ। मूल अडान र भित्री को विजेता सुविधा हुन र संगठनात्मक छवि जोड मदत गर्नेछ। "कुना" दस्तावेज चयन मा अवस्थित नियम भर गर्न सधैं आवश्यक छ। कानूनी आवश्यकताहरू अनुपालन मा उपभोक्ता को कुना कस्तो हुनुपर्छ?
कानुनी रूपरेखा "उपभोक्ता को कुना"
को अडान को गठन को लागि औपचारिक कानुनी आधार (vv। 8-10) र "उपभोक्ता अधिकार को संरक्षण मा" को आरएफ व्यवस्था छ केहि सामान को बिक्री को नियम (पृ। 10)।
व्यवस्था यसको शब्द छैन देखि, खडा आधिकारिक नाम को deprived "कुना उपभोक्ता को"। केवल आवश्यकताहरु र यसमा राखिएको कागजातको सूची संकेत गर्छ।
कि निर्माण कुनै पनि संगठनात्मक-कानुनी प्रकारका स्वामित्वको उद्यम, एक उत्पादन वा सेवा प्रदान, उपभोक्ता जानकारी डाटा सामान र सेवाहरू को विशेषताहरु, सञ्चालन बारे, आफ्नो व्यवसायको बारेमा पहुँच गर्ने क्षमता प्रदान गर्न बाध्य छन् वितरित।
यस ग्राहकको दायाँ व्यवस्था को धारा 8 मा उल्लेख यी विश्वसनीय डाटा थाह गर्न। यो एक प्रमुख र पहुँचयोग्य स्थानमा उपभोक्ता अडान लागि कागजात राख्न चाहन्छ। तसर्थ, "कुना" आगंतुकों खुलेर उहाँलाई भेट्नुपर्छ सक्छ र सिक्न भनेर फाँसी गर्नुपर्छ।
व्यवस्था गरेर, उपभोक्ता जस्तै जानकारी व्यक्त गर्न आवश्यक छ:
आधिकारिक दर्ता फारम, निर्माण, उत्पादन वा प्रदर्शन सेवाहरू बेचन;
इजाजतपत्र र गतिविधिको विशिष्ट क्षेत्रहरु लागि accreditation।
सबै अनिवार्य नियुक्ति जानकारी नियम र केहि सामान को बिक्री पनि समावेश छ। पाठ पनि तिनीहरूलाई राखिएको छ जानकारी बोर्ड। नियमहरूमा उल्लङ्घन गर्ने, व्यवसायी कला अनुसार, आशा जिम्मेवारी। 14.5 प्रशासकीय कोड को।
को "उपभोक्ता को कुना" को लागि आवश्यक कागजातहरू
उपभोक्ता लागि अडान अनिवार्य कागजातहरू एक नम्बर तयार गर्न आवश्यक छ।
राज्य दर्ता (प्रमाणित प्रतिलिपि) को प्रमाणपत्र।
लाइसेन्स - गतिविधि (प्रमाणित प्रतिलिपि) को प्रकार मा निर्भर गर्दछ।
नियन्त्रण र निरीक्षण लग stamped शरीर को समारोह प्रदर्शन सबै विभाग र एजेन्सीहरू (ठेगाना र फोन नम्बर) को सूची।
उपभोक्ताहरु 'अधिकार को संरक्षण मा आरएफ व्यवस्था "। निरीक्षण शरीर सामान्यतया मुद्रित संस्करण लिन। विश्वसनीय स्रोतबाट हुन इन्टरनेट मुद्रण कागजातहरू छलफल छैन।
केही उत्पादनहरु को बिक्री सर्तहरू वा खानपान सेवाहरूको प्रावधान को नियम (चयन उद्यम को गतिविधि को स्कोप परिभाषित)।
पुस्तक समीक्षा। प्रायजसो, यो खुला उपभोक्ता उपलब्ध हुन खल्ती मा अडान मा लटकी। पुस्तक प्रदान रूपमा ग्राहक यसलाई अनुरोध पछि (पृ। 8 बिक्री) यसको तत्व कुनै पनि लागू हुँदैन।
उपभोक्ताहरु 'अधिकार को संरक्षण मा व्यवस्था "विक्रेता (उत्पादकहरु वा प्रदर्शन गर्ने) संकेत को मद्दतले कम्पनीको कर्पोरेट नाम, ठेगाना, र सञ्चालन प्रक्रिया बारे ग्राहकहरु सूचित गर्न भनेर उल्लेख गरे। आईपी राज्य दर्ता र एजेन्सीहरूले त्यस प्रदान डाटा अलग्गै, बाहिर यसलाई पूरा गर्न। सधैं कर्मचारीहरु पालन गर्नुपर्छ जो सञ्चालनको मोड, साइन र अडान मा संकेत गर्नुभयो।
को अडान थप दस्तावेज
मात्र होइन अनिवार्य कागजात, तर थप जानकारी को उपस्थिति सेवाहरूको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र सार्वजनिक सामान छोड्नुहोस्। यस्तो कागजातको सूची व्यवस्था द्वारा नियमन छैन, तथापि, संघीय सेवा तिनीहरूलाई गर्ला।
उपभोक्ता अडान लागि थप दस्तावेज सूची:
को निकासी योजना र आगो सुरक्षा निर्देशन।
SRN (को खानपान र खाना व्यापार को लागि अलग अलग स्तर रूपमा डिजाइन)।
उपभोक्ता सेवाहरूको कार्यान्वयन (यो क्षेत्र मा उद्यम द्वारा प्रयोग) र प्रस्तावित सेवाहरूको मूल्य सूची लागि नियम।
केही वैधानिक लाभ र जनसंख्याको केही विभाग लागि सेवा अवस्था।
सामान केही विभाग को कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित जानकारी। उदाहरणका लागि, को निषेधाज्ञा र छोराछोरीलाई रक्सी र सुर्ती उत्पादन को बिक्री को लागि जिम्मेवारी।
यस्तो महत्त्वपूर्ण तत्त्व लागि, उपभोक्ता कुना लागि फोन को विक्रेताहरु नियन्त्रण सञ्चालन आकस्मिक सेवाहरूमा (MES, आदि), एजेन्सीहरू को फोन नम्बर, र सेवाहरू हुन्, जहाँ ग्राहकहरु उजुरी गर्न सक्छन्। यो ठेगाना र उपभोक्ता संरक्षण स्थानीय विभाग फोन नम्बर को उपस्थिति आवश्यक छ।
को अडान को एक ठूलो आवाजमा थप र स्तर भण्डारण लागि रचनाहरू गर्न सक्नुहुन्छ , खाद्य उत्पादनहरु को को सेनेटरी नियमहरु अनुसार। कहिलेकाहीं यो ग्राहक र अन्य जानकारी उपयोगी नियमहरू देखाउन आवश्यक छ।
सबै व्यवसाय गर्न व्यक्तिगत उपभोक्ता को कुना बनाउन। गतिविधि प्रत्येक क्षेत्र अवस्थाको हुक्म। सना, hairdresser कोठा मा उपकरण को नियुक्ति लागि सेनेटरी मान्यता र नियमहरू आवश्यक पर्दछ। आयोग व्यापार सम्भव छैन उपयुक्त नियम बिना छ। औषधि पसल आवश्यक लागूऔषधको बिदा अभिशासित नियमहरु आवश्यक छ।
को "उपभोक्ता को कुना" को लागि नियामक अधिकारीहरु
उपभोक्ता अडान सामग्री Rospotrebnadzor ट्र्याक। यदि निरीक्षण समयमा पाइने संगठनमा उल्लंघन एउटा प्रशासनिक दण्ड, को दण्ड लगाएको गर्न सकिँदैन: उद्यमीहरू लागि - 30 हजार सम्म - अप3हजार rubles गर्न, र कानुनी संस्थाहरू लागि। पेनाल्टी अदालतमा अपिल गर्न सकिन्छ, तर यो नियम अन्तर्गत तुरुन्तै सबै कागजात तयार गर्न धेरै सजिलो छ।
उपभोक्ताहरु 'अधिकारको सुरक्षा खडा स्थानीय अधिकारीहरूले र एजेन्सीहरूलाई ध्यान को वस्तु हो। अनिवार्य जानकारी सूचीमा स्थानीय कानून समावेश गर्नुहोस्।
प्रमाणपत्र, लाइसेन्स र प्रमाणपत्र
सबै दस्तावेज, विक्रेता (प्रदर्शन गर्ने, उत्पादकहरु), ग्राहक सम्बन्ध गतिविधिहरु विनियमन, को अडान "उपभोक्ता को कुना" मा हङ। राज्य को नियन्त्रण पुष्टि गर्न के हुनुपर्छ?
कानून मा उल्लेख छ जो कम्पनी, राज्य दर्ता को प्रमाणपत्र एक प्रमाणित प्रतिलिपि (उपभोक्ताहरु 'अधिकार ऐन को संरक्षण मा लेख9"को पहिलो अनुच्छेद)।
कर कार्यालय दर्ता को प्रमाणपत्र प्रतिलिपी।
Accreditation (नम्बर, वैधता र यसलाई जारी गर्ने अधिकार को अवधि) को प्रमाणपत्र।
व्यापार संघ व्यावसायिक रजिस्टर मा संगठनको परिचय मा कागजातको प्रतिलिपि प्रदान गर्नुहोस्। यो रूसी संघ विषयहरू को अधिकारीहरु द्वारा गठन र "रूसी संघ मा आधार राज्य व्यावसायिक गतिविधिहरु को नियम मा" व्यवस्थाले नियमन छ। रजिस्ट्री कुनै पनि सामान को कार्यान्वयन र वितरण मा लगी क्षेत्रीय स्तरमा व्यापार क्षेत्र मा डाटा, र उद्यम समावेश गर्दछ। निर्माता यसलाई मा समावेश गरिएको छैन।
लाइसेन्स क्षेत्रमा संलग्न उद्यम लाइसेन्स हुनुपर्छ। वैध उपभोक्ता लाइसेन्स हेर्न र कसरी लामो र के नम्बर अन्तर्गत यो जारी गर्ने, पत्ता लगाउन सही छ।
प्रमाणपत्रहरू र घोषणाहरू
प्रमाणपत्रहरू र घोषणाहरूमा सेवा र काम को एकरूप attesting अवस्थित नियमहरु द्वारा बाहिर (कागजात नम्बर, वैधता को अवधि, अख्तियार स्वीकार वा दर्ता गर्न)।
स्थायी परिसर लागि प्रदान आवश्यक कागजात को यो सूची (ग्राहक लागि खडा), र एक अस्थायी fairground को साइट, ट्रे व्यापार, खोखे, पाल वा टाढा उपभोक्ता सेवाहरू मार्फत बिक्री मा।
वर्गीकरण सूची र सेवा क्षेत्र डाटा
लागि घरेलू सेवाहरू मर्मतका नियम को क्षेत्र अनुसार, प्रबंधक ग्राहक सेवा जानकारी प्रदान गर्न बाध्य छ। यो सामान्यतया उपभोक्तालाई को कुना मा हङ छ। त्यो सधैं समीक्षाको लागि सार्वजनिक उपलब्ध हुनुपर्छ?
सेवाहरूको दायरा, आफ्नो कार्यान्वयनको प्रकारका साथ सँगै काम गर्दछ। भुक्तानीको फारम, सेवा र सामाग्री को लागत आवश्यक छ।
सेवा प्रावधान र काम कार्यान्वयन लागि स्तर मा दिशानिर्देश।
समय सीमा र वारेन्टी अवधि।
काम गर्न विशेषज्ञ डेटा।
अनुबंध, रसिद र ग्राहक द्वारा जारी विभिन्न कागजातहरू नमूनाहरू।
दृश्य मोडेल नमूनाहरू र पत्रिका।
कुना सजावट उपभोक्ताहरु पुस्तक समीक्षा बिना कल्पना गर्न असम्भव छ। यसको अनुदान लागि जिम्मेवार छ जो संगठन, समावेश:
सामान केही प्रकार को कार्यान्वयन लागि व्यावसायिक उद्यम;
खुद्रा व्यापार नेटवर्क;
घरेलू सेवामा संलग्न कम्पनी;
मर्मत र कार, मोटर गाडी मर्मतका लागि उद्यम।
"उजुरीहरु" सादा दृष्टि मा स्थित एक नियम रूपमा पुस्तक, उपलब्ध र बित्तिकै त्यो सोधे रूपमा ग्राहक प्रस्तुत। यसलाई नियन्त्रणमा र व्यापार क्षेत्र खानपान, स्थानीय कार्यालयमा रेकर्ड गरिएको छ। बाहिर खातामा लिएर "उजुरीको पुस्तक मा निर्देश।"
पुस्तकको उपस्थिति सबै हल, स्टोर, stalls, साथै उपभोक्ता क्षेत्र जाँच गरीएको छ। के भण्डारमा अपील आफ्नो अधिकार अभ्यास गर्न चाहन्छ जो आगन्तुक लागि तयार हुनुपर्छ? निस्सन्देह, एक कुर्सी र टेबल मा एक सीट एक कृतज्ञता, अनुरोध वा उजुरी एउटा अपील लेख्न।
यो एक ग्राहक समीक्षा पासपोर्ट र कुनै पनि कागजात छोड्न उहाँले किन उजुरी लेख्न पुस्तक, मागे किन बारेमा प्रश्न गर्न चाहन्छ जो सोध्न निषेधित छ।
लेखा को पत्रिका
लेखा अडिट लागि पत्रिका को उपस्थिति सम्बन्धित उपभोक्ता आवश्यकताहरु को कुना गर्न। यो अडान मा बाहिरै गर्न आवश्यक छैन, तर केवल उपलब्ध हुन। को Supervisory शरीर को प्रतिनिधिहरु यसलाई मा बाहिर जाँच को परिणाम एक नोट बाँकी छन्। यो पत्ता उल्लंघन, डिजाइन प्रोटोकल र निर्देशन जारी बारेमा टिप्पणी, चेक, आफ्नो विषय र कार्यहरू लागि घटना, मिति, समय र कारण आयोजित गर्ने संकेत गर्छ। वास्तवमा पत्रिकाको अभाव एक कार्य गठन। नियन्त्रण गतिविधिहरु विशेष कानून द्वारा नियमन छन्।
रक्सी लागू खरीदार संगठन को क्षेत्र मा के समावेश गर्नुपर्छ?
रक्सी उत्पादन को बिक्री धेरै कारोबार। के जानकारी रुचि ग्राहक प्रदान गर्न तयार हुनुपर्छ? को अडान मा स्थान के?
उपभोक्ता को कुना मा "केहि सामान को बिक्री को लागि नियम" को 19 औं अध्यायमा एउटा अंश रचनाहरू आवश्यक छ। मूल्य सूची, उपभोक्ता गुणहरू, रक्सी, घडी को कार्यान्वयन: यी नियमहरू अनुसार, संगठनको नेतृत्व ग्राहक स्पष्ट र पहुँचयोग्य जानकारी सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ।
यो विक्रेता तयार र उपभोक्ता को पहिलो अनुरोध निम्न कागजात प्रदान गर्नेछ भन्ने उल्लेख गरेको छ:
कागजातहरू उत्पादन को विक्रेता वा निर्माता प्रमाणीकरण पारित गरेको छ भनेर प्रमाणित।
मादक उत्पादनहरु लागि राज्य स्तर मा डाटा।
निर्माण, कम्पनी नाम, कानुनी ठेगाना, मिति र bottling ठाउँमा को देश: कम्पनी को।
मूल्यहरु उत्पादनहरु (नाम, मान) को लागि।
कन्टेनर मा पोषण मूल्य र मात्रा।
अवस्थित रक्सीको प्रयोग गर्न contraindications।
उत्पादन संरचना र सामाग्री, प्रयोग र additives।
सामाग्री जानकारी GMOs देखि उत्पादन, वा स्वास्थ्य को लागि हानिकारक।
सबै जानकारी स्थापित आवश्यकताहरु र प्राविधिक स्तर को दृश्य प्रदान गरिएको छ।
यो अडान "उपभोक्ता को कुना" जस्तो हुन सक्छ?
उपभोक्ता को मानक क्षेत्र के हो? कुनै सख्त आवश्यकताहरु। को उपस्थिति को लागि नियमहरु, को अडान कुनै व्यवस्था छ।
मुख्य नियम - दृश्यात्मकता, पहुँच आगंतुकों लागि र कागजातहरू माग को उत्पादन। यो आत्म-अध्ययन दस्तावेज लागि ग्राहक सहज अवस्था लागि प्रदान गर्न आवश्यक छ।
उपभोक्ता क्षेत्र कसरी बनाउने? कागजात, मात्र अडान वा समतल मा फोल्डरहरूमा चिन्ह लगाइएको गर्न सकिन्छ ग्राहकहरु लागि सुविधाजनक कुनै पनि रूप मा। affordability - तर यो उद्देश्य लागि पृथक विन्डो ग्लास यो मुख्य कुरा रोक्छ किनभने, उपयुक्त छैन।
पारदर्शी pockets कागजातहरू संग अडान गर्ने विकल्प लोकप्रिय। कहिलेकाहीं यो एउटा सानो फोल्डर निश्चित छ। कागजात फोल्डर मा राखिएको छ भने, फोल्डर को अभिलेखमा "उपभोक्ताहरु लागि सूचना" मा गरिन आवश्यक छ। यसलाई सार्वजनिक डोमेनमा प्रदर्शनमा राख्न राम्रो छ।
ग्राहकहरूको लागि सधैं महत्त्वपूर्ण मिति जानकारी छ। दस्तावेज उपभोक्ता लागि यसलाई आफ्नो अप्रचलन रूपमा अद्यावधिक गर्न आवश्यक छ।
तयार क्षेत्र उपभोक्ता (अडान मोडेल) सधैं धेरै तरिकामा धेरै विज्ञापन र उत्पादन कम्पनीहरु मा देख्न सकिन्छ। को अडान को उत्पादन वा खरिद कागजातहरू को प्याकेज सङ्कलन गर्न आवश्यक छ अघि राखिएको र निर्णय आकार मा, pockets संख्या सकिन्छ।
यसरी, स्तर को कमी र विकल्प को एक किसिम यो सम्भव एउटा aesthetically आकर्षक र रोचक "उपभोक्ता को कुना" बनाउन बनाउन। त्यस्तो अडान मा कस्तो हुनुपर्छ? जो विक्रेता (कलाकार, निर्माता) को संगठन, ग्राहक सम्बन्ध र दायित्व को गतिविधिहरु विनियमित कागजातहरूको।
INN गरेर ठेकेदार आफूलाई जाँच गर्नुहोस्। करार मा जोखिम कसरी कम गर्ने?
कसरी एक्लै मास्को मा अर्थात् खोल्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
कोड तमिलनाडु वेद टीएस - को संकलनको र वर्गीकरण लागि रूपरेखा
थोक तथा खुद्रा "अन्तर्राष्ट्रिय" मास्को मा बजार
लाइसेन्स गतिविधि - रेस्टुरेन्ट मा रक्सी को लागि इजाजतपत्र कसरी प्राप्त गर्ने?
एक साना व्यापार - कि के हो? मापदण्ड र एउटा सानो व्यापार को विवरण
Animated तस्वीर: यो गर्न कठिन छ?
उज्ज्वल जीवनी Andreya Mironova
पृथ्वीको अर्धव्यास के हो
Dagestan भान्सा: स्वादिष्ट व्यञ्जनहरु
को कलाई संयुक्त मा एक धनुकोष्ठ कसरी चयन गर्न: सुझाव र डाक्टर को समीक्षा
Welds र जोइन्टहरूमा को वर्गीकरण
तपाईंको स्वास्थ्य को लागि alkaline खनिज पानी
Motherboard Gigabyte GA-MA770 DS3: निर्दिष्टीकरण, फोटो र समीक्षा
प्लास्टिक दर्पण - आधुनिक सजावट सामाग्री
Totalitarian र authoritarian राजनीतिक regimes, आफ्नो विशेषताहरु र मतभेद